वि.सं. २०७८ साल श्रावण ३२ गते सोमबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल श्रावण ३२ गते सोमबार
साउन ३२, २०७८ ०७:३६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण ३२ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त १६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणशुक्लपक्षको अष्टमी तिथि विहान ७:१० बजेसम्म, त्यसपछि नवमी रहनेछ ।
नक्षत्र : अनुराधा रात्रि ३:१५ बजेसम्म, त्यसपछि ज्येष्ठा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग : ब्रह्मा विहान ७:०९ बजेसम्म, त्यसपछि ऐन्द्र रहनेछ ।
आनन्दादी योग : मानस ।
करण : बालव वेलुका ५:५६ बजेसम्म, त्यसपछि तैतिल रहनेछ ।
सूर्य : कर्कट राशिमा, चन्द्रमा : बृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्याेदय : ५:३५ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ६:३९ बजे ।
(भोलि : वल्केपर्व, कीर्तिपुरमा बागभैरवयात्रा)
मेष : शारीरिक आलस्यताका कराण काम गर्न मन लाग्ने छैन । आम्दानी घट्नेछ । लक्ष्यमा पुग्न कडा परिश्रम गर्नुपर्ला । गर्नैपर्ने कार्यमा समेत ढिला सुस्तीले गर्दा पछि परिनेछ । आफन्तजनसँग नै बैरभाव उत्पन्न हुनेछ ।
वृष : भविष्यका लागि नयाँ कार्ययोजना रचिनेछ । माया प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ । व्यवसायबाट उचित लाभ उठाउन सक्दा हौसला थपिनेछ । मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापमा सहभागी हुने मौका मिल्नेछ ।
मिथुन : लामो समयदेखि रोकिएका कार्यले स्थान पाउने छन् । व्यवसायबाट मनग्य नाफा कमाइनेछ । नयाँ तौर तरिकाको प्रयोगले गर्दा नाफा दर बढाउन सकिने छ । काम गरेर सन्तुष्टि मिल्नेछ । व्यवहारिक पक्ष सबल रहनेछ ।
कर्कट : सुख, शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ । सन्तानको साथ सहयोगले कार्य बन्नेछ । अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगतिको संकेत देखिन्छ । पारिवारिक जमघटले मन रमाइलो वातावरण बन्नेछ ।
सिंह : नयाँ कार्यको थालनिले समस्या ल्याउनेछ । झन्झटिला परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । गोपनियता बाहिरिँदा विपक्षीको विजय हुनेछ । अध्ययनमा अल्लि जोड दिनु पर्नेछ । प्रतिक्षित नतिजामा गिरावट आउला ।
कन्या : श्रमको सहीरुपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ । साझेदारी काम कार्यको सुरुवाती हुनेछ । व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ मिल्दा खुसी लाग्नेछ । उदारपन रहनेछ । दाजुभाइको सहयोगले महत्वपूर्ण काम बन्नेछ ।
तुला : बोलिकै भरमा काम बन्नेछन् । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । धन सञ्चय गर्न मन लाग्नेछ । लगनशिल भएर लाग्दा प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । देशदेशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ । घरायसी समस्या हल भएर जानेछ ।
बृश्चिक : स्वास्थ्य ठीकठाक नै रहनेछ । प्रेम प्रसंग चल्नेछ । बल, बुद्धिको सही ठाउँमा प्रयोग गर्नाले सफल भइनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ । श्रृंगारिक कार्यमा ध्यान जानेछ । दिन शुभ रहने देखिन्छ ।
धनु : हतारको निर्णयले समस्या मात्र सृजना हुनेछ । सञ्चित धन रकम खर्च हुनेछ । विपक्षीले दु:ख दिने छन् । गरिरहेको कार्य छाड्नु पर्दा चिन्ता छाउनेछ । अनावश्यक कार्यमा ध्यान दिँदा गर्नैपर्ने कार्य भने अलमलमा पर्नेछ ।
मकर : व्यवस्थापन पक्ष सवल रहनेछ । सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । राजैतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति एवं चासो रहनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका कार्यले गति लिनेछ । इच्छा, आकङ्क्षाहरु थपिने छन् ।
कुम्भ : काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । बन्धुवान्धवसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । इमान्दारीताको कदर हुनेछ । शत्रू पक्ष कमजोर रहँदा कार्य गर्न सहज हुनेछ । नेतृत्वगणको विश्वासको पात्र भइनेछ । शुभ खबर मिल्नेछ ।
मीन : धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । भाग्यभाव बलियो रहेको छ । सामान्य मिहिनेतले नै ठूलाकाम बन्नेछन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बढेर जानेछ । गुरुजनको सरसल्लाह लिएर अघि बढ्दा विजयी भइनेछ ।
कार्तिक १०, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित